Faah faahin dheeraad ah oo laga helayo dagaal ka soconaayo duuleedka magaalada B/weyne – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin dheeraad ah oo laga helayo dagaal ka soconaayo duuleedka magaalada B/weyne
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal aad u culus oo duuleedka magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan maanta ku dhexmaraya labo maleeshiyo beeleed, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalka isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu salka ku haayo dilal shalay deegaanka Baar loogu geystay labo caruur iyo labo haween oo u dhashay mid ka mid ah beelahaasi dagaalamaya.
Deegaanka Baar oo qiyaastii 30-km u jirta magaalada B/weyne ayaa la sheegayaa inuu weli ka soconayo dagaalkaasi u dhaxeeyo labada maleeshiyo beeleed.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyooday 3 qof oo dhinacyadda dagaalamaya ah, iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen, sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Illaa iyo haatan ma jiro faah faahin intaasi dheer oo dagaalkaasi laga helaayo, waxaana inta badan duuleedka magaalada B/weyne sidaan oo kale hore ugu dagaalamay maleeyshiyo beeleed aanooyin qabiil u dhaxeeysa.